Apple TV + inongova ne3% chikamu chemusika muUS | Ndinobva mac
Mushure mekunzwa nhau kuti Apple iri kuwedzera kunyoreswa kwemahara kwegore kuApple TV + Kusvikira Chikunguru, haufanire kunge wakangwara kwazvo kufunga kuti vhidhiyo chikuva hachina kukanganisa kunotarisirwa pakati pevashandisi veterevhizheni.
Mwari uye rubatsiro (uye akawanda mamirioni emadhora) ari kuzokubhadharira iwe Apple TV + tsvaga nzvimbo pakati pemapuratifomu makuru ari muchikamu. Ndiwo chete mubvunzo wepa terevhizheni kupihwa. Iyo Disney + chikuva chakatangwa mushure maApple, uye chine mugove wemusika zvakapetwa kashanu kumusoro. Asi nekupihwa simba uye mari yavari kuisa muCupertino, ingori nyaya yenguva Apple TV + isati yapedzisira yagamuchirwa zvakanyanya pakati pevoruzhinji terevhizheni.
Vhiki rega rega isu tine nhau dzemapurojekiti matsva epaTV iyo Apple TV + yakabata, kana kutanga kutora mifananidzo, kana kuratidzwa kwayo kuri padyo, kunyangwe kwemwaka wechipiri, senge dzakateedzana. Dickinsonkana kushumira, kupa mienzaniso miviri.
Zvakadaro, chikuva ichiri kure nekutorwa sekubudirira kukuru. Kuongorora kutsva kwe JustWatch inotsanangura kuti Apple TV + yaingova ne3% mugove wemusika mukota yechina ye2020 muUS, ichisaririra kumashure kwemamwe mapuratifomu akadai Netflix, HBO o Disney +.
JustWatch, kambani yakatsaurirwa kuongororwa kwekutenderera pamapuratifomu evhidhiyo, yakaburitsa nhasi chinyorwa chinonakidza nezve chikamu chemusika wekushambadzira vhidhiyo masevhisi muUnited States. Tsvagurudzo inoenderana nedhata rakaunganidzwa panguva ye kota yekupedzisira ya2020, uye funga mapuratifomu akakurumbira anowanikwa muUS.
Sezvaitarisirwa, Apple TV + yanga isiri iyo yakakurumbira chikuva chekota, asi yekupedzisira mune chinzvimbo ine chikamu chemusika cheiyo chete 3% muU.S. Apple TV + yakatombosara shure kwePeacock, NBC Universal yekufambisa sevhisi yakaunzwa muna Chikunguru wegore rapfuura, iyo yakatumira chikamu che6% pamusika panguva iyoyo
Netflix, mutungamiri asina kupokana
Netflix inoenderera kuve mutungamiriri wekushambadzira mapuratifomu muUS aine 31%, asi Amazon Prime Vhidhiyo yanga ichikura uye ichiswedera padyo ne22%. Hulu anouya anotevera ne14% uye Disney + ne13%, ichiteverwa neHBO Max ine 9% chikamu chemusika.
Ramba uchifunga kuti zvese zviri zviviri Peacock, HBO Max y Disney + Vakavhurwa mushure meApple TV +, uye huwandu hwavo hunopfuura zvinogamuchirwa, tichifunga nezvemakwikwi makuru ari muchikamu ichi. Unongova mubvunzo wekuwanikwa kweterevhizheni. Hapana anokahadzika nemhando yeApple TV + zvemukati, asi zvinoramba zvichishomeka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » Apple TV + ine chete 3% chikamu chemusika muUS.
Inogona kuitika nhau muAirPods 3 uye AirPods Pro